Wararkii ugu dambeeyay Markab kale oo ku ciladoobay Kanaal Suweys – Radio Dalsan FM 91.5 MHz | Warar Sugan | Somalia News
Wararkii ugu dambeeyay Markab kale oo ku ciladoobay Kanaal Suweys
By Webmaster	 On Apr 6, 2021
Warbaahinta dalka Masar ayaa maanta oo Talaado ah waxaa shaacisay in Markab nooca Xamuul ay cillad ku qabsatay Marinka mashquulka badan ee Kanaalka Suweys ee dalka Masar.
Markabka oo lagu magacaabo MV RUMFORD oo dalka Talyaaniga laga leeyahay ayaa waxaa la sheegay inay cillad Farsamo qabsatay, xilli uu ka sii gudbayey Marinkaasi.
Markabka MV RUMFORD waxaa la dhisay sanadkii 2012-kii, wuxuuna ku safraa Calanka Talyaaniga. Lama soo sheegin inuu Markabku sababay hakad ku yimid Maraakiibta isticmaasha Kanaalka Suweys ee isku-xira Badda Cas iyo Badda Mediterrean Sea.
Shabakadda Cairo 24 ayaa qortay inay Ilo-wareedyo u sheegeen in Markab nooca Shidaalka ku joogsaday KM-ka 133-aad ee tirsiga Maraakiibta, isla markaana loo diray Dooni nooca Tugboat ee Maraakiibta jiida.
Shabakaddu waxay qortay in Markabkaasi la filayo in loo soo jiito Harada Biyaha Milixda leh Bitter Lake ee isku xirta Badda Mediterranean Sea iyo Kanaalka Suweys.
Dhinaca kale, Ilo-wareedyo la hadlay Telefishinka CNBC Arabia waxay sheegeen inuu Maamulka Kanaalka Suweys beeniyeen wararka la isla dhex marayo inuu Markabkaasi xayiray Dhaqdhaqaaqii isku-socodka ee Kanaalka, kadib, markii uu mid ka mid ah Matoorada Markabka uu shaqadii gabay.
Maamulka Kanaalka ayaa waxay xaqiijiyeen in Xaalladda wax laga qabtay, lana cillad bixiyey Markabkaasi oo ah nooca Booyadlaha shidaalka oo waday Batrool lagu qiyaasay 6 Tan.
Tallaalka COVID-19 oo Maanta ka bilowday Degmo ka tirsan K/Galbeed